Manatanteraka ny lalàna - Fiangonan'Andriamanitra any Suisse manerantany
lahatsoratra > Day-by-Day > Manatanteraka ny lalàna
“Fa fahasoavana madio tokoa no namonjena anareo. Tsy misy azonao atao ho an'ny tenanao afa-tsy ny matoky izay omen'Andriamanitra anao. Tsy mendrika izany ianao tamin'ny fanaovana na inona na inona; fa tsy tian’Andriamanitra hisy holazaina eo anatrehany ny zava-bitany » (Efesiana 2,8-9GN).
Hoy i Paoly: “Ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana; koa ny fitiavana no fahatanterahan’ny lalàna” (Romana 13,10 Baiboly Zurich). Mahaliana fa mirona ho azy ny mamadika io fanambarana io isika. Indrindra raha resaka fifandraisana dia tiantsika ho fantatra ny toerana misy antsika. Tiantsika ny hahita mazava tsara, hampihatra fitsipika momba ny fifandraisantsika amin’ny hafa. Ny hevitra hoe ny lalàna no fomba hanatanterahana ny fitiavana dia mora kokoa ny refesina sy fehezina noho ny hevitra hoe ny fitiavana no fomba hanatanterahana ny lalàna.
Ny olana amin'ity fomba fisainana ity dia ny olona iray dia afaka manatanteraka ny lalàna tsy misy fitiavana. Saingy tsy afaka ny hitia ianao raha tsy manatanteraka ny lalàna. Ny lalàna milaza ny fihetsiky ny olona tia. Ny maha samy hafa ny lalàna sy ny fitiavana dia ny fitiavana avy any anaty, ny olona miova ao anatiny; ny lalàna, etsy ankilany, dia miantraika any ivelany ihany, ny fihetsika ivelany.
Izany dia satria ny lalàn'ny fitiavana sy ny lalàna dia samy manana ny fotokevitra nitarika azy samy hafa. Ny olona tarihin'ny fitiavana dia tsy mila ampianarina momba ny fomba fitondran-tena am-pitiavana, fa ny olona tarihin'ny lalàna no mila azy. Matahotra izahay fa raha tsy misy fitsipika matanjaka toa ny lalàna, izay mitaky antsika hanana fitondran-tena tsara, dia mety tsy hanana fihetsika mifanaraka amin'izany isika. Na izany aza, ny tena fitiavana dia tsy iharan'ny fepetra, tsy azo terena na terena. Omena malalaka sy raisina an-kalalahana izany fa raha tsy izany dia tsy fitiavana. Mety ho fanekena na fankasitrahana izany, fa tsy fitiavana, satria tsy misy fepetra ny fitiavana. Ny fanekena sy ny fanekena dia matetika mifamatotra amin'ny toe-javatra ary matetika mifangaro amin'ny fitiavana.
Io no antony mahatonga ilay antsoina hoe fitiavana antsika mora resahina rehefa tsy mahafeno ny fanantenantsika sy ny fitakianay ny olona tiantsika. Io karazana fitiavana io dia tena ekena fotsiny izay omentsika na mitazona amin'ny fiankinan-tsaina. Maro amintsika no tsaboina amin'ny fomba toy izany ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra ary ny lehibentsika ary matetika isika dia mitondra ny zanatsika toy ny very an-tsaina.
Izay angamba no mahatonga antsika tsy mahatsiaro tena noho ny fiheverana fa ny finoana an’i Kristy no nahatratra ny lalàna. Tiantsika ny mandrefy zavatra hafa amin'ny hafa. Fa raha voavonjy amin'ny fahasoavana izy ireo amin'ny finoana ny tena maha-izy azy, dia tsy mila refesina intsony isika. Raha tia azy ireo Andriamanitra na dia eo aza ny fahotany, ahoana no ahafahantsika mitsara azy ireo kely sy tsy mitana ny fitiavana amin'izy ireo raha tsy mitondra ny heviny araka ny hevitrao?
Tsara ny vaovao tsara fa voavonjy amin'ny alàlan'ny finoana daholo isika rehetra. Afaka mankasitraka indrindra an'izany isika, satria tsy nisy ny olona fa i Jesosy no nahatratra ny refin'ny famonjena. Misaora an'Andriamanitra noho ny fitiavana tsy misy fepetra ao aminy izay hanavotany antsika sy hanodinana antsika ho lasa toetran'i Kristy!